I-Semalt: Izigaba Zokulahla Inkonzo (DoS) Ukuhlaselwa
Ukuhlaselwa kwe-DoS kuwumzamo ononya ukwenza amaseva wakho noma izinsiza zenethiwekhi zingatholakali okwesikhashana noma unomphela. Abaqaphi bafeza lo msebenzi ngokwenza izinsizakalo ezahlukene. Ngenxa yalokho, bangakwazi ukumisa okwesikhashana noma ukuphazamisa ama-akhawunti akho impilo yonke. Ukuhlaselwa kwe-Denial of Service kuvame ukubandakanya uhla lwemishini eyonakele esetshenziselwa ukukhomba amakhompyutha amasha namadivayisi eselula. Le mishini ibangela ukuhlukunyezwa okuhlukahlukene futhi ikhukhumeze izinsiza ezihlosiwe ngezicelo eziqhubekayo, imibuzo kanye nemilayezo engafuneki. Ukuhlaselwa kwe-DoS kungathinta amadivayisi akho kakhulu futhi kuvame ukubulawa njenge-botnets.
U-Andrew Dyhan, Semalt uMenenja weNtuthuko weKlayenti, uthi ukuhlaselwa kwe-DoS kuhlukaniswe ngezigaba ezimbili ezihlukene:
1. Uhla lwe-DoS lokuhlasela lwesicelo
Loluhlobo lwe-DoS lokuhlasela lubandakanya izikhukhula ze-HTTP, ukuhlasela kwe-zero-zay noma ukuhlasela okusheshayo (iSlowloris noma i-RUDY). Lokhu kuhlaselwa kwe-DoS kuhloswe ukubangela izinkinga ngenani elikhulu lezinhlelo zokusebenza, izivumelwano zokuxhumana, nezinhlelo zokusebenza zewebhu. Babonakala bengenacala futhi banembile, futhi izicelo zibukeka zithembekile, kodwa ubukhulu babo bulinganiswa ngesimo sesicelo ngomzuzwana..Lokhu kuhlaselwa kwe-DoS kuhloswe ukuqeda izicelo ezihlosiwe ngezicelo eziningi, kubangele ukukhumbula okukhulu nokusetshenziswa kwe-CPU. Kuzogcina noma kuphazamise izicelo zakho zekhompyutha.
2. Ukuhlaselwa kwenethiwekhi ye-DoS
Ukuhlasela kwe-DoS yenethiwekhi kunomkhukula we-UDP, isikhukhula se-SYN, ukuthuthukiswa kwe-NTP, ukukhuliswa kwe-DNS, ukukhuliswa kwe-SSDP, nokuhlukaniswa kwe-IP. Lawa wonke ama-barrage ephezulu futhi alinganiswa ngama-gigabits ngomzuzwana. Zibuye zilinganiswe ngendlela yamapakethe ngomzuzwana futhi zihlale zibulawa yi-zombie amakhompyutha noma ama-botnets.
Ukuhlaselwa kweDoS kusakazeka kanjani?
Abakwa-cybercriminals bafuna ukuthelela nokulawula amakhulu ezinkulungwane, ngisho nezigidi ze-Smartphones namakhompyutha. Bafuna ukwenza njengamakhosi ama-Zombies noma amanethiwekhi we-botnet futhi bahambise ukuhlaselwa kwe-Distributed Denial of Service (DDoS), imikhankaso emikhulu yogaxekile, nokunye ukuhlaselwa kwe-cyber. Kwezinye izimo, abakwa-cybercriminals basungula inethiwekhi enkulu yeZombies nemishini ethelelekile yokufinyelela amanethiwekhi namadivayisi amasha, njengokuthengiswa okuqondile noma ngesisekelo sokuqasha. Abakwa-spammers bangase baqashe futhi bathenge amanethiwekhi ukuze basebenze imikhankaso yogaxekile emikhulu.
amabhodlela we-DoS namathuluzi awo:
Umdali we-botnet ubizwa ngokuthi i-bot herder noma i-botmaster. Ulawula amabhuku e-DoS avela ezindaweni ezikude futhi anikeze imisebenzi ethile kubo nsuku zonke. Ama-botmasters axhumane nesiphakeli se-DoS ngeziteshi ezifihliwe njengama-protocols angenacala, amawebhusayithi akwa-HTTP namanethiwekhi e-IRC. Angasebenzisa futhi izingosi zomphakathi ezifana ne-Twitter, Facebook, ne-LinkedIn ukuze uthole ukuxhumana nabanye.
Amasiphakeli we-botnet angakwazi ukuxhumana kalula noma abambisane namaseva e-DoS namanye amaseva we-botnet, ekwakheni inethiwekhi ephumelelayo ye-P2P elawulwa yizazi ezilodwa noma eziningi ze-bot. Kusho ukuthi ubani ongakwazi ukunikeza imiyalelo kwinethiwekhi ye-DoS njengoba ukuhlaselwa kunemvelaphi eminingi futhi abaduni kuphela abazi ngokuvela kwawo. I-bots ye-DoS ihlale ifihliwe ngemuva kwezinsizakalo ezingaqondakali futhi yenza sengathi inikeze amakhasimende abo ngamathuluzi amaningi aphambili, okungenasisekelo engelutho.